Home » Travel Travel » Mandeha sy mihetsika ny fizahan-tany any Malezia
Ao anatin'ny lalam-pilaminana ny fizahan-tany any Malezia hoy ny tale jeneraly lefitra.
Nanazava ny fomba fiasa i Datuk Musa Hj Yusof.
Ao anatin'ny fomba azo antoka ny fizahan-tany any Malezia, saingy tsy midika izany fa tsy miasa ny masoivohon'ny governemanta
Ny Tale Jeneraly lefitra misahana ny fizahan-tany any Malezia dia nilaza fa ny biraony any ivelany dia mandaka sy mihetsika
Ny World Network Network dia nanasa Fizahan-tany Malaysia amin'ny fifanakalozan-kevitra ifanakalozana ary betsaka ny milaza momba ny fomba famoronana namorona an'i Malaysias hanokatra indray ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Datuk Musa Hj Yusof no Tale Jeneraly lefitra misahana ny fizahan-tany any Malezia. Ny zoma ny Tambajotra fizahan-tany manerantany tsianjery herintaona ny fifanakalozan-kevitra momba ny dia nataony ary nanasa ny Tale lefitra hanavao ny mpihaino manerantany momba ny toe-draharaha eto Malezia.
Rudi Herrmann, moderatera, Filohan'ny WTN ho an'ny Toko Malaysia dia nilaza fa i Datuk Musa Hj Yusof no lehilahy nahalala ary fantany izany.
Ny fizahan-tany any Malezia dia ao anatin'ny fomba azo antoka amin'izao fotoana izao. Sazy mihatra amin'ny orinasa, tsy fanarahana ny lalàna napetraky ny rafitra Safe Mode ao amin'ity firenena Azia atsimo ity dia nitombo hatramin'ny $ 200.00 ka hatramin'ny $ 10,000.00. Azo atao izao indray ny fivoriana kely.
Nikatona ny sisintany iraisampirenena, saingy resahina miaraka amin'i Singapaoro, Indonezia, Thailandy, ary Brunei ny fiaingan'ny fivezivezena.
“Manangana fahatokisan-tena amin'ny dia an-trano izahay. Tonga tamin'ny fanentanana madio sy azo antoka i Malezia. Tsy nisy olona tany Malezia voan'ny COVID-19 tany amin'ny hotely. Ny spikes dia hita eo amin'ny sehatry ny orinasa, fa tsy amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Tonga ny sidina ary miainga avy any amin'ny faritra Golfa, nefa manana fonon-tànana vita amin'ny fingotra ny ankamaroany. Malaysia dia iray amin'ireo mpamokatra fonon-tànana vita amin'ny fingotra lehibe indrindra.
Ny birao fizahan-tany Maleziana any ampitan-dranomasina dia mihetsika sy mihetsika ary mandaka arak'i Datuk. Ny hetsika dia misy ny fifanakalozan-kevitra B2B ary ny fanatonana ny media sosialy.
Mpandray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy maro no nikatona tao Malezia noho ny kobazy ary tonga mpitondra tenin'ny vokatra momba ny dia sy fizahan-tany ao amin'ny firenena ary koa ny indostrian'ny sakafo.
Alain St Ange, minisitry ny fizahantany taloha ho an'i Seychelles dia nanery ny fametrahana pasipaoro fanaovam-baksiny iraisam-pirenena. Nanaiky i Datuk Musa Hj Yusof.
Jereo ny eritreriny: